Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Na-akpali akpali, na-akpali akpali, ebube, afụ ụfụ, ezughị okwu iji kọwaa 7 egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe. Ọzọkwa, ọbụlagodi na ị chere na ị nwere ike ịghọta ịdị ukwuu ha, naanị mgbe ị banyere, na ị ghọtara anwansi. Ya mere, if you are an…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Famous ekiri fim na Europe na-aghọwo akụkụ dị mkpa nke European omenala. Famous ekiri fim na Europe na-ekwe nkwa na ị na pụrụ iche arụmọrụ. Ọ ga-ahapụ gị kpaliri, kpaliri na spellbound! Ọdịdị nke n'ịrụ nkà bụ apụ n'anya ngwa ngwa na creativity zuru spectacularly. These flashes of brilliance live on…